Chọpụta echiche iji jigharị nnukwu iko ite | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 10:00 | Emelitere ka 29/04/2021 21:00 | Home
El arụ ọrụ na okike imegharị ihe bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma na anyị nwere ike ime iji mee ka ndụ anyị dịtụ obere na ụbọchị ọ bụla. Kwa ụbọchị, anyị na-eji ite mmiri n’ime ọtụtụ nri dịka jams ma ọ bụ mkpo. Enwere ike ịtụba mkpọ ndị a n'ime akpa ihe eji arụ ọrụ mana anyị nwekwara ike iji ụfọdụ mee ihe ọhụụ, nke bụ ụzọ dị iche iche eji emegharị ihe nke na-enyekwa ogologo ndụ na iko ahụ.
Ọ bụ ya mere taa anyị ga-aga hụ otú iwerekwa iko ite, ihe dị mfe anyị niile nwere n’ụlọ ma jiri ya rụọ nnukwu ihe. Chọta ma chịkọta iko iko ndị ahụ ị tufuru ugbu a wee dịrị njikere iji ha ọzọ maka ihe dị iche iche. Will ga-ahụ na e nwere ụwa dum ịchọta.
1 Iko ite iji chekwaa ngwa nri
2 Ghaa ngwa nri n’ite gi
3 Jiri ite dị ka tuppers
4 Mepụta oriọna dị ịtụnanya
5 Ololo ite na-echekwa ihe
Iko ite iji chekwaa ngwa nri
Ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ọtụtụ ihe bụ ikpokọta ite iko nwere otu nha ma ọ bụ atụmatụ ndị yiri ya. N'ụzọ dị otú a ọ ga-adị mfe maka ihe niile ijikọ ma dị mma. I nwekwara ike ime zụta otu ihe mkpuchi ma ọ bụ ọbụna tee ha n'otu agba. Ọ dị mfe ịchọta aha maka ihe dị iche iche dị ka kọfị, ngwa nri, ma ọ bụ kuki, mana enwekwara akara ngosi dị ka ị nwere ike ide na mgbe e mesịrị ma ha dị ọtụtụ. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji jupụta kom kom ma ghara ịzụta ndị ọzọ ịchekwa ụdị ihe ndị a. Wayzọ na-eri obere ihe.
Ghaa ngwa nri n’ite gi
Obere ngwa nri nwere ike kụrụ na obere oghere. Yabụ na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike iji ụgbọ mmiri ndị a kụọ osisi ụfọdụ dịka obere parsley ma ọ bụ oregano dịka ọmụmaatụ. Gha ụdị ihe a na - enyere anyị aka ka anyị ghara ịzụta nke ukwuu ma anyị ghọtara na ọ ga - abụ ihe na - atọ ụtọ ịme ihe nke aka gị dị ka ngwa nri dị mfe ilekọta ma lekọta anya. Wayzọ a ị ga-enwe kpamkpam pasili dị ọhụrụ na kichin gị na enweghị itinye ego nke ukwuu.
Jiri ite dị ka tuppers
Zọ ọzọ ịlaghachi iji obere iko ite a bụ ebu nri ufọt ufọt usenubọk m̀m or uwemeyo. Ọ bụ eziokwu na ite ndị ahụ nwere ike ito ibu karịa ma iko ahụ ga-aka arụ ọrụ nke ọma karị ma ọ bụrụ na anyị ga-eme ka nri sie ọkụ na ngwa ndakwa nri ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọzọ. N'ime ite ndị a ị nwere ike iburu obere salads ma ọ bụ nri kwa ụbọchị iji rie ọrụ ma ọ bụ ebe ị na-agụ akwụkwọ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike iji ha mee ihe ugboro ugboro.
Mepụta oriọna dị ịtụnanya
Ololo ite bụ otu ugboro ọzọ nwere ike ịbụ jiri chọọ ụlọ anyị mma. N'okwu a, anyị nwere ike iji iko iko dịka akụkụ nke oriọna ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enwere ọtụtụ oriọna nwere bulbs na ikuku mana anyị nwere ike iji mkpọ ahụ na-enwupụta ìhè ma nye ya mmetụ dị iche, na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na nke mbụ. Ọ bụ ngbanwe siri ike ịme ma mana ọ nwere ike bụrụ oriọna dị egwu.
Ololo ite na-echekwa ihe
Mkpọ ndị a dị mma maka ịhazi ihe n'ụlọ. Na mgbakwunye, ha zuru oke maka kichin, yabụ enwere ọtụtụ ndị na-eji ha na kichin iji hazie ihe ndị dịka cutlery. Ị nwere ike tinye nkpado ka inwe ihe nile na saiti gi ma jiri ite maka nhazi ebe ọ bụla. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji mee ka ha nọrọ nso mgbe anyị chọrọ ha. Yabụ anyị nwere ike ịnwe ihe kachasị iji nso dị n'ụgbọ mmiri. Ọ bụ echiche dị mfe ma ọ nwere ike ịdị ezigbo mma ma ọ bụrụ na anyị ahọrọ ite iko mara mma nke enwere ike iji akwa ma ọ bụ ụdọ chọọ ya mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Echiche iji jigharị ite iko